Raw Synephrine HCL Powder (5985-28-4) Vagadziri - Phcoker
Synephrine HCL upfu chinhu chinowanzoitika alkaloid kemikari kemikari yakawanikwa zvirimwa uye yakaburitswa kuti ishandiswe sekuwedzera …… ..
Raw Synephrine HCL powder (5985-28-4) video
Raw Synephrine HCL powder (5985-28-4) Tsanangudzo
Kemikari Name Synephrine hydrochloride; 5985-28-4; 4- (1-Hydroxy-2- (methylamino) ethyl) phenol, hydrochloride;
muchiso Name Yocon
Kirasi yeMishonga Fati yakarasika
Molecular Wsere 203.666 g / mol
Kunyorera Point 147-150 ° C
Boiling Point 341.10 ° C. @ 760.00 mm Hg (est)
ruvara Yakachena kune off-chena poda
Skukodzera Hapana zuva rawanikwa
APane Zviri pachena kuti mafuta anonyanya kupisa zvinokonzera
Raw Synephrine HCL powder inowanzoitika alkaloid chemicals yakagadziriswa yakawana michero uye yakabudiswa kuti ishandiswe sekuwedzera. Synephrine dzimwe nguva inonzi "marangi ane ruvara" sezvo ichibva kune machungi maduku. Muzvokwadi, iyo inowanzowanikwa munharaunda yemarangi, ndicho chikonzero ichi chinozivikanwa sechishuwo machena. Zvinoshungurudza maruva ikozvino zvinoshandiswa pane nhamba dzakafanana dzakafanana uye mamwe matambudziko ano mazuva ano sekurema kwekureruka uye sekubatsira muhondo kurwisana netsoka. iyo imwe yemakemikari makuru mumunoramondi ane ruzivo uye anofungidzirwa kuti ndiyo nheyo yemiti yekuporesa yemiti yacho Raw Synephrine HCL powder, pasina mubvunzo mafuta anonyanya kupisa ingredients.Synephrine inowanikwa kubva kumaarangi, uye kana uchinge uine, unogona vanobatsirwa mune zvose zvakasiyana siyana.
Sezvokudya zvinowedzera zvinoshandiswa, synephrine HCL powder inogona kunge yakachengeteka kune vakawanda vakakura kana yakashandiswa zvakanaka. Zvisinei, kune zvimwe zvikanganiso zvishoma zvishoma pakati pevashandisi vanotorawo akawanda synephrine hcl. Synephrine inokurudzira, saka zvakakosha kutanga pamutero wepasi kuti uone kushivirira. Kunyanyisa synephrine HCL kunogona kukonzera kukurumidza kuwedzerwa kweropa, kushaya mwoyo, kugadzika kweganda, kugara, kusuruvara, kushungurudzika, kuputika, zvinetso zvepumusoro, kushaya musoro, kudengenyeka, shuga yeropa shoma uye kusagadzikana kwehuga kweropa, kurwadziwa kwepamuviri, kushungurudza kweropa, uye chirwere, kunyanya kusanganiswa nezvimwe zvinokurudzira.
Synephrine hcl powder (5985-28-4) Mechanism of Action
Mwoyo yemigumisiro ye lig ligisi inobatanidza ne adrenergic receptor kusunga. Muzhinji, kana ligands inonamatira kune-a-adrenergic receptors, vasoconstriction inoitika, uye kana kusungirirwa kune β1-adrenergic receptors, moyo yevasimba chikwata uye kuwedzerwa kwemhepo yemutengo. Zvidzidzo zvinoratidza kuti synephrine hcl powder inosunga ku β3-adrenergic receptors, zvichiita kuti kuwedzerwa mumuviri kukwanisa kuputsa mafuta. Kusungira β3-adrenergic receptors hakuiti kukanganisa kwemwoyo kana kuwedzerwa kweropa. Zvakare, nokuti synephrine inoratidza zvishomanana kana kusina kusungirirwa kune α1-, α2-, β1-, uye β2-adrenergic receptors uye haifaniri kunge yakashandisa zvisina kunaka adrenergic zvinokonzera, mitezo yemwoyo, yakadai sekuwedzera kwepfungwa yemwoyo uye kuwedzera kweropa, haisi anowanikwa pane zvinowanzoshandiswa, asingatauri dzimwe nhamba dze phenylethylamine uye zvinyorwa zve phenylpropanolamine. Zvidhinho zviduku zvinokonzera kukanganisa kukuru mu adrenergic receptor kusunga uye zvichizogona kukwanisa kubudisa mitsemangara yemwoyo.
Synephrine Hcl powder inowedzerawo kushandiswa kwemuviri yehydrohydrates kuburikidza kuwedzera simba rakafanana neAATP.49-52 Inobatsira kushandiswa kwemasero emagetsi mumasero emasumbu, uye glycogenolysis, gluconeogenesis, glycolysis, uye oxygen uptake. Kusabatanidzwa kwei-calcium ion uye musangano ne adrenergic receptors kwakaratidzwa kuti inobatanidzwa mune izvi zvinokanganisa zvipenyu, zvichiratidza kusabatanidzwa kwezvikonzero zvakawanda.
Kunze kwekuti, kushandiswa kweSynephrine hcl powder kunodzivisa kushandiswa kweNF-kB. Ichi chinhu chinokosha pakukonzera zvirwere zvinopisa sezvakaita asthma. Kushandiswa kweSynephrine powder kwave kuwanikwawo kunobata chiito che eotaxin-1 hormone zvikuru. Izvi zvinodzivirira kufamba kwe eosinophil kunzvimbo inopisa.
Kunyange zvazvo isina kunyatsojekeswa kuburikidza nekuedza, kushandiswa kweSynephrine hcl powder kwawanikwa kuvhara chiito cheacetylcholineterase. Ichi chemikemikari inozivikanwa kukonzera chirwere cheAlzheimer.
Benefits yaSynephrine hcl powder (5985-28-4)
Synephrine hcl nokuda kwekurasika
Synephrine hcl kubatsira chido chokurasikirwa
Synephrine hcl inowedzera zviri nani muscular glucose uptake
Synephrine hcl zvisingabatsiri glycogenesis
Synephrine hcl anobatsira mukudzora chirwere cheshuga
Synephrine hcl inovandudza kudya
Synephrine hcl inoderedza kutya pamberi pokuvhiyiwa
Synephrine hcl inovandudza mafungiro uye masimba emagetsi
Synephrine hcl kubatsira kutarisa mabhakitiriya anokuvadza
Synephrine hcl kubatsira kuderedza kutuka
Yakakurudzirwa Synephrine hcl powder (5985-28-4) Dosage
Iyo inowanzo shandiswa Synephrine hcl muyero ndeye 100mg pazuva. Izvi zvinoonekwa seyakakwana muyero unokwanisa kuwana kurema. Nekudaro, iyo inokurudzirwa huwandu iyo kunyangwe ivo vane mamiriro evashandisi havafanirwe kupfuura iri 200mg pazuva. Chero chipi zvacho chiri pamusoro pechiratidzo chinoonekwa sechine chepfu uye chichaisa munhu panjodzi yekuona raft yemhedzisiro yemhedzisiro inosanganiswa neanokurudzira anoshandisa. Zvinokurudzirwa, kutanga ne, 10 kusvika 20mg kuti uve nechokwadi chekuti Synephrine hcl powder inoenderana mushe nemuviri wako. Mushure mekutora iyi yekutanga dosi, iwe unofanirwa kutora nguva yekuongorora mhinduro yemuviri kune yekuwedzera. Kana zvese zvanaka, wechipiri muyero unosvika 20mg unogona kuwedzerwa mushure maawa maviri. Kunze kwezvo, iyo yakachengeteka nguva yekuyera iri kutora Synephrine hcl powder kamwe chete maawa maviri.
Zvikanganiso yaSynephrine hcl powder (5985-28-4)
Iko kushandiswa kweSynephrine kunoendawo pamwe nemhedzisiro senge chero mumwe mushonga. Kana mumwe murume achiroora kushandisa synephrine hcl pamwe chete zvine caffeine. inouyawo nezvimwe zvinokanganisa. Izvi zvinotevera mimwe mhedzisiro.
Vakafa kana vakashandiswa muhombe yakakura vasati vasvika pakuvhiyiwa.
Coronary spasms uye thrombosis
Mwoyo rhythm kuvhiringidzika (ventricular fibrillation)
Kupera kwemazana emusero (rhabdomyolysis)
Nzira yakakanganiswa nemhaka yekuwedzera kuwedzera mumisumbu (bilateral compartment syndrome)
Chirwere chepfuva (variant angina)